Haasya Bangya | Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more - Part 22
धुर्मुस सुन्तली दंगै : मन्जेले पढाउन थाले मुसहर केटाकेटी
सामाजिक कामका लागि दौडधुप गरिरहेका सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमीरे (सुन्तली) दंगै परे, जब उनीहरुले मुसहर बालबालिका पढ्न थालेको खवर सुने । केही समय अगाडि धुर्म..
प्रेम दिवसमा धुर्मुस, सुन्तलीको सन्देश
हास्यकलाकारद्धय सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमीरेले प्रेम दिवसको दिन आफ्ना सुभेच्छुकलाई, एक सन्देश दिँदै यो दिवस मनाएका छन् । उनीहरुले आफ्नो सन्देशमा, प्रेम एक फेसनको रुप..
दीपाश्रीको लप्पन छप्पन : दिपकले गरे सहयोगको आश
दीपकराज गिरीको टिमले आफ्नो नयाँ फिल्मको नाम जुराएको छ । टिमले, तीन चार महिनाको छलफल पछि मात्रै फिल्मको नाम लप्पन छप्पन जुराएको हो । यही फिल्ममार्फत दीपाश्री ठूलो पर्दाम..
नक्कली शुसिल कोईराला (राजाराजेन्द्र) का ५ कुरा
पूर्व प्रधानमन्त्री शुसील कोईरालाको निधनले देश शोकमा छ । यो शोकले टेलिभिजनको पर्दामा उनकै नक्कल गरेर दर्शक हसाउँदै आएका हाँस्य व्यंग्यकार राजा राजेन्द्र पोख्रेललाई झन् ..
मुन्द्रे धमाका गर्न जीतु नेपाल मलेसियाबाट हङकङतिर
स्टेज कार्यक्रमहरुमा ब्यस्त रहेका जीतु नेपाल मुन्द्रे अहिले हङकहङमा हसाईरहेका छन् । मलेसियामा रक स्टार धमाका गरेका उनी हङकङ पुगेका हुन् । उनी हङकङपछि दुबई जानेछन् । टेल..
चौरासी बा बन्दा प्रधानमन्त्री नै मै हुँ जस्तो लाथ्यो : राजाराजेन्द्र
झण्डै ४ बर्ष अघि , शुसिल कोईरालाले प्रधानमन्त्रिको कुर्सि ताक्दै गर्दा राजा राजेन्द्र उनकै नक्कल गरेर हाँस्य टेलिश्रृंखला मेरि बास्सैमा हिट भईसकेका थिए । नक्कली नेतालाई..
पढ्नुहोस्, हास्यकलाकार दिपकराज गिरीको दश चोटिला ट्विट
१. अब बिरामी परेर डाक्टर कहॉ जानु पर्दा ।अख़्तियारको मान्छे संगै लानु पर्छ । पहिला डाक्टरको सर्टिफ़िकेट चेक गर्ने अनि मात्र आफ्लार्इ चेक गर्न दिने । २. नडराऊ , यो भूकम्प होइन । मधेशबादी दलले सिमांकन मिलेन, मिलेन भनेर कराइ रहेकोले इश्वरले हल्लाइ हल्लाइ मिलाइ रहनु भएको हो । ३. अब नाका तिर धेरै ऑखा […]
रुख चढ्न सिपालु जेठा लाहुरेका कान्छा छोरा मुन्द्रे
जीतु नेपाल नेपाली हास्यब्यङ्ग्यमा स्थापित नाम हो । जीरे खुर्सानी हास्यब्यङ्ग्य टेलिश्रृङ्खलामा उनले निभाएको मुन्द्रे पात्र धेरैले रुचाएका छन् । उनलाई अहिले पनि मुन्द्रेकै नामले बढी चिनिन्छ । जब उनै मुन्द्रेले हामीलाई बाल्यावस्था र किशोरावस्थाका रमाईला किस्साहरु सुनाए, उनलाई चिनाउने नामहरु थुप्रै रहेछन् भन्ने बुझियो । उनको सफलता ..
हास्यकलाकारहरुको ब्यस्तता : को के गर्दैछन् ?
हास्यब्यङ्ग्य टेलिचलचित्र बन्द भए पनि हास्यकलाकारहरुको ब्यस्तता कम भएको छैन । उनीहरु स्टेज कार्यक्रममा ब्यस्त छन् । कोही सामाजिक कार्यमा लागेका छन् । कोही भने ठूलो पर्दाको चलचित्र बनाउन कस्सिएका छन् । दीपकराज गीरी, जीतु नेपालको टोली फिल्म बनाउँदै दीपकराज गीरी, जीतु नेपाल र केदार घिमीरे लगायतको टोलीले नयाँ चलचित्रका लागि कथा फाईन..
हास्यब्यङ्ग्य टेलिसिरियल बन्द पछि, कलाकारहरुको नयाँ भुमीका – सद्भावना दूत
अहिले नेपाली हास्यब्यङ्ग्य टेलिश्रृङ्खलाहरु बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ । एक दशक भन्दा बढी समय प्रशारणमा गएको चर्चित हाँस्य टेलिश्रृङ्खला तीतो सत्य बन्द छ । मेरी बास्सै बन्द छ । जीरे खुर्सानीमा पुरानै एपिसोडहरु दोहोरिरहेका छन् । प्रशारणमा गईरहेका सिरियलहरुका पनि कहिले के , कहिले कुन कारणले प्रशारण प्रभावित हुँदै आएको छ । शिवहरी पौ..
जन्म दिन मनाउने तक्मे बुढाको यस्तो काइदा
विल्सन विक्रम राई (तक्मे बुढा) आजदेखि २९ वर्ष लागेका छन् । वि.सं २०४३ साल माघ १५ गते जन्मिएका तक्मे बुढा आफ्नो जन्म दिनमा आफ्नै गाउँमा पुगे । लोकप्रीय हाँस्य कलाकारको परिचय बनाईसकेका तक्मेले आफुले अध्ययन गरेको विद्यालय सम्झे । जन्म दिनमा तडक भडक गर्नु भन्दा गुरुहरुको आर्शिवाद लिने निधो गरे । जन्म दिन मनाउँदा आफैँले […]
कलाकारको दल प्रवेश केबल जगत हँसाउने खेल : दिपकराज गिरी
हाँस्य कलाकार दिपकराज गिरीले नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेका कलाकारलाई सशंकीत हुँदै सुझाव दिएका छन् । दलहरुले कलाकारहरुलाई चुनावका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै सचेत रहन सुझाव दिएका हुन् । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग नायिका करिश्मा मानन्धर, सरोज खनाल र अशोक शर्मा आवद्ध रहेको खबर बाहिरीएपछि उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्..
खाडि मुलुकमा हुनुहुन्छ ? यसरी लिनुहोस् दुई थोपा हाँसो ।
दुख बाँड्ने धेरै हुन्छन् । सुख र खुशि बाँड्ने र दिने कमै हुन्छन् । तर, विदेशमा पुगेर परिश्रम गरिरहेकाहरुलाई सिस्नु पानी नेपालले सित्तैमा दुई थोपा हाँसो दिने भएको छ । उनीहरुले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानी रहेको भन्दै सिस्नु पानीले खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई निशुल्क हाँसो दिने भएको हो । भोली माघ ७ देखि २९ […]
मुन्द्रेले पनि खोले दर्शक हँसाउने युट्युब च्यानल
हाँस्य कलाकारहरु हाँस्य टेलिश्रृंखला छाडेर अरु काममा नै व्यस्त हुन थालेका छन् । लोकप्रीयताको शिखरमा पुर्याउने चर्चित हाँस्य टेलिश्रृंखलाहरु बन्द भएपछि हाँस्य कलाकारहरु युट्युब, महोत्सव र विदशमा हुने कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन् । तितो सत्यका दिपक र दिपा फिल्म निर्माणतर्फ ढल्कीए । मेरी बास्यैका माग्ने र तक्मे बुढा युट्युब च्..